Topi-maso Mahafinaritra Mikasika Ny Fiainan’ny Rajako Shimpanzee Malaza Tao Japana Talohan’ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 15:56 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Ελληνικά, Español, русский, বাংলা, Italiano, English
“Rita sy Lloyd”, shimpanzes roa tao amin'ny Zoo Tennoji tao Osaka talohan'ny ady. Sary avy amin'ilay mpisera Twitter, Mulboyne.
Mpisera Twitter malaza, Mulboyne namoaka andian-tsary tazanina mahavariana tao Osaka talohan'ny ady, raha niomana tanteraka ho amin'ny fidirana ho miaramila sy ny ady i Japana.
Mandefa votoaty matetika momba an'i Japana ao amin'ny Twitter i Mulboyne, mponina efa ela tao amin'ny firenena, mitantara ny zava-drehetra manomboka amin'izay mety ho sushi navalombalona boribory tsy dia malaza amidy eny amin'ny tsenambarotra lehibe Japoney hatramin'ny valim-pikarohana sary lehibe momba ny “gaijin” (“vahiny” , amin'ny teny japoney) ary malaza amin'ny fanatsarana ny mariky ny orinasa.
Anatin'ity tranga ity, namoaka andian-tsary momba an'i Osaka talohan'ny ady i Mulboyne, raha nanjary tanàna lehibe indrindra vetivety tao Japana taorian'ny horohorontany Kanto Lehibe nandrava an'i Tokyo tamin'ny taona 1923 ny tanàna.
Efa nahazo tombony tamin'ny firoboroboan'ny indostrian'ny fanenoman-damba i Osaka, izay nahazoany ny marika hoe “Manchester ao Atsinanana”. Natao tamin'ny taona 1925 ity fampiratiana ity.
Ity iray tamin'ireo naranty tamin'ny fampiratiana tamin'ny taona 1925, mampiseho ireo sakafo izay mandrafitra ny sakafo isan'andron'ny olona ao Osaka. Azo antoka fa tsy niezaka ny handoka ny tenan'izy ireo tamin'ity endrika ity izy ireo.
Ny lahatsoratra tao amin'ny Twitter, izay manomboka amin'ny fitrandrahana momba an'i Osaka talohan'ny ady, dia miova amin'ny fanadihadiana ny fiainan'ny iray amin'ireo mponina malaza indrindra tao amin'ny Zoo Tennoji tao Osaka tamin'izany fotoana izany, Rita, ilay shimpanzee, araka ny voarakitra tamin'ny boky “Japanese Wartime Zoo Policy: the Silent Victims of World War II (Ny Politikan'ny Zoo tamin'ny Fotoanan'ny Ady Japoney: ny fahanginan'ireo Lasibatra tamin'ny Ady Lehibe faha-2).”tamin'ny taona 2010 nosoratan'i Mayumi Itoh.
Tamin'ny taona 1930, iray amin'ireo biby malaza indrindra tao amin'ny Zoo Tennoji tao Osaka i Rita, ilay rajako shimpanzee.
Rita miaraka amin'ny lehiben'ny shogi Yoshio Kimura
Tsy azo ihodivirana, fa mampiseho ny fivoaran'ny fanjakazakana ara-miaramila tsy mitsaha-mitombo ao Japana ho toy ny fiandohan'ny ady ny sary.
Tamin'ny taona 1940, notafian'ny zoo tamin'ny fanamian'ny tafika i Rita.
Na izany aza, talohan'ny nanombohan'ny adin'i Japana tamin'i Etazonia sy ny firenen-kafa Tandrefana, nahazo namana i Rita, izay maty nandritra ny fiterahana.
Tamin'io fotoana io, nanana namana antsoina hoe Lloyd izy, ary niditra tamin'ilay hetsika ihany koa izy.
Nanan-janaka maty teo am-pahaterahana tamin'ny taona 1940 i Rita, ary maty tsy ela taorian'izay koa izy avy eo. Ny mpandimby azy tao amin'ny zoo, dia shimpanzee antsoina hoe Taro, izay maty noho ny faharerahana be loatra. Nanana fandaharam-potoana tafahoatra be ihany koa i Rita.
Raha nanery an'i Lloyd, ilay shimpanzee, ny governemanta miaramila Japoney mba hanana anarana Japoney mandra-paharesy an'i Japana. Maty tamin'ny anarana Rita kosa i Rita, efa teo am-piketrehana izay ho anarana japoney vaovao ho an'i Lloyd ny governemanta miaramila Japoney nandritra ny ady. Ny sarivongan'izy roa sisa no tavela ankehitriny ao amin'ny Zoo Tennoji tao Osaka.
Tsy maty i Lloyd, fa tsy amin'ny anarana Lloyd. Rehefa nandràra ny fampiasana ny teny anglisy ny Minisiteran'ny Fampianarana, dia nantsoina hoe Katsuta izy. Misy sarivongan'ireo chimpanzees roa ireo ao amin'ny zoo.
Azo arahina ao amin'ny Twitter ato i Mulboyne.